Atariishada reer Hollywood ee Margot Robbie iyo markii lagu kalifay in muuqaal dareen leh kuhor duubto 30 oo aysan aqoonin. Sawiro. – Filimside.net
Atariishada reer Hollywood ee Margot Robbie iyo markii lagu kalifay in muuqaal dareen leh kuhor duubto 30 oo aysan aqoonin. Sawiro.
Filimka The Wolf of Wall Street wuxuu soo baxay sanadkii 2013dii waxaana hogaamiye ka ah filimkaasi aktarka caanka ah ee Leonardo DiCaprio asigoona filimkaan Box Officeka wacdaro ka dhigay.
Inta badan dadkii fiirsaday filimkaan waxay xusuusnaan doonaan doorkii gabadha Hollywoodka ah ee reer Australia Margot Robbie markii kicineyso dareenka ninkeeda Leonardo DiCaprio uu filimkaasi ku jilaayo hase yeeshee ma oga dhibka ay u martay sameynta doorkaasi.
Margot Robbie ayaa doorkaas matashay iyadoo laga rabay iney isku hor qaawiso qol ay kula jiraan dad kabadan 30 qofood kuwaasoo ahaa howl wadeenada filimka oo aysan badankooda aqoonin.
Atariishadaan ayaa waxaa laga rabay iney soo jiidato dareenka Leonardo DiCaprio iyadoo waliba gacanteeda ku salaaxeyso qeybaha ugu xaasaasisan jirkeeda waxayna falkaasi kuhor sameysay 30 nin hortooda.
Margot Robbie oo mar dambe u warameysay majalada Porter ayaa tiri; “ lagaama dareemaayo badanaa inaad xishooneysid markaad sameyneysid muuqaalada nuucaas ah, waxaan aheyn kuwa kudhex jirna qol aad u yar waxaana qolka nagula jiray 30 qofood oo shaqaalaha howl wadeenada ahaa dhamaantoodna waxay ahaayeen rag, iyadoona muuqaalkaas duubistiisa uu socday 17 saacadood oo xiriir ah”
Iyadoo hadalkeeda sii wadato ayay tiri; “waxaan ahaa mid gacanteeda ku salaaxdo meelo xaasaasi ah oo jirkeyga ka tirsan, waxayna dhacdadaas ii aheyd tijaabo layaab leh hase yeeshee waa inaad iska dhaga tirtaa xishoodka aad dareemeysid iyo foolxumada muuqaalkaas waana inaad diirada saartaa howsha duubista”.
Halkaan hoose ka daawo sawiro ku saabsan muuqaalkaas.